Gabdho walaalo ah oo halmar ku geeriyooday inta u dhaxeeysa Berbera iyo Hargeysa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gabdho walaalo ah oo halmar ku geeriyooday inta u dhaxeeysa Berbera iyo Hargeysa
Wararka naga soo gaaraya deegaanada Somaliland ayaa sheegaya in labo gabdhood oo walaalo ah islamarkaana lagu kala magacaabo Asma Maxamed Yuusuf iyo Fowsiya Maxamed Yuusuf ay ku dhinteen daad ka dhashay roobabkii gu’ga oo ka da’ay deegaanada ku yaalla halkaas.
Geerida labadaasi gabdhood ayaa timid kadib markii sida la sheegay uu qaaday daad aad u xoogan oo ku dhuftay togga Dacar-Buluq, islamarkaana la tegay gaarigii ay labadaasi gabdhood wateen, iyagoo markii hore kasoo tegay magaalada Berbera, kuna sii jeeday magaalada Hargeysa.
Gaarigii ay la socdeen labadaasi gabdhood oo ahaa nooca Nissan Surf-ka ayaa waxaa si lama filaan ah u qaaday biyaha daadka ah, waxaana meydadkooda laga helay wadada u dhaxeeysa magaalooyinka Berbera ee Hargeysa, sida uu warbaahinta u xaqiijiyay Maxamed Abokar oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maamulka Somaliland.
Dhinaca kale, mas’uuliyiinta maamulka Somaliland ayaa isku dayay inay labadaasi gabdhood bad-baadiyaan, balse waxay geeridooda noqotay mid lama filaan ah kadib markii uu qaaday togga Dacar-Buluq, oo sanad kasta dad badani ay ku geeriyoodaan.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa deegaanada gobolada waqooyi ee Somaliland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ka da’ayay roobab aad xoogan, oo la sheegayo inay geysteen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.